Tuesday December 23, 2014 - 10:07:08 in Wararka by
Kooxda Napoli ayaa ciyaar laysku dhamaaday kooxda Juventus kaga qaaday koobka Super Cupka Talyaaniga, waqtiga rasmiga ah ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaaday barbaro 2:2 ah. Tevez iyo Higuain ayaa min laba gool kooxa hooda u kala dhaliyay. Ugu danbayn a
Kooxda Napoli ayaa ciyaar laysku dhamaaday kooxda Juventus kaga qaaday koobka Super Cupka Talyaaniga, waqtiga rasmiga ah ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaaday barbaro 2:2 ah. Tevez iyo Higuain ayaa min laba gool kooxa hooda u kala dhaliyay. Ugu danbayn ayay kooxda Napoli ku guulaysatay rekoodhayaal. Goolahayaha Napoli ee Rafael ayaana noqday halyayga kooxdiisa Napoli u horseeday inay qaado koobkan Super Cupka kadib markii uu rekoodhihii ugu danbeeyay ka badbaadiyay Simone Podoin.
Iyada oo ay ciyaartu dhamaanayso isla markaana aya u muuqatay inay Juventus koobka dhagaha qabsan doonto ayuu markaliya xaalku isbadalay,
waxayna ciyaarta gashay xaalad waali ah, kadib markii uu markale Gonzalo Higuaín u jawaabay Tevez oo uu kooxdiisa Napoli u dhaliyay goolka barbaraha, isaga oo markale ciyaarta ka dhigay barbaro 2:2 ah. Goolka Higuaín ayaana ciyaarta qasab kaga dhigay in rekoodhayaal lagu kala saaro labada kooxood.
Ciyaartan oo ahayd mid layaableh ayay labada kooxood laagteen rekoodhayaal tiro badan, waxaana tuurashada rekoodhayaasha ku horaysay kooxda Napoli iyada oo uu u tuuray Jorginho kaas oo uu ka badbaadiyay goolhaye Buffon, laakiin rekoodhayaal badan kadib ayuu ugu danbayn goolhayaha Napoli ee Rafael noqday halyayga kulankan ee Napoli guusha ay koobka ku qaaday u horseeday kadib markii uu ka badbaadiyay Simone Podoin rekoodhaha guushu kooxdiisa ku raacday.
Rafa Benitez iyo kooxdiisa ayaana iska jaray koobka ay sida adag ugu dagaalameen. Waa markii labaad ee ay kooxda Napoli ku guulaysato koobka Super Cupka Itlay, waxayna marka horena ka qaaday isla kooxda Juventus.